सेना कसरी उत्रन्छ, हामी पनि हेर्छौं: सीपी गजुरेल – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:३६ English
सेना कसरी उत्रन्छ, हामी पनि हेर्छौं: सीपी गजुरेल
० तपाईंहरू आखिर चुनावबाट पछि हटिछोड्नुभयो, होइन ?
– हामी पछि हटेका होइनौँ, सहमति तोडेर हामीलाई निर्वाचनमा सहभागी नगराउने र देशलाई फेरि द्वन्द्वतिर लैजाने यो चारदलीय सिन्डिकेटको रणनीतिअनुरूपको परिणति हो । वार्ता उनहरूले तोडेका हुन्, हामीले होइन ।
० खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अडान लिने तपाईंहरू, अनि कसरी उनीहरूले वार्ता तोडेको भन्न मिल्छ ?
– खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने कुरा त बुर्जुवा डेमोक्र्यासीको सिद्धान्तले पनि मागिरहेकै विषय हो नि । हामीले कुन अनौठो र अर्घेलो कुरा ग-यौँ र ? राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका एउटै व्यक्तिमा केन्द्रित गरिदिनु त विडम्बना र दुर्भाग्यको कुरा हो नि त । वास्तवमा उनीहरू हामीलाई निर्वाचनमा आएको देख्नै चाहन्नन् भन्ने हाम्रो अनुमान सही सिद्ध भएको छ । चारदलले भन्थे कि यो हामीले बनाएको सरकार हो, हामीले जे भन्यो त्यही हुन्छ । तर, हामीले भन्दै आयौँ कि रेग्मी सरकार चार दलको वशमा रहँदैन, निरङ्कुश भएर जानेछ । प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिन रेग्मीजीले नमान्नुको अर्थ सरकार निरङकुश दिशातिर लम्किसकेको भन्ने नै हो । चारदलीय इशारामा यो सरकार चल्छ भन्ने भ्रम अब कसैले नपाल्दा हुन्छ ।
० तपाईंहरूले खिलराज भनेका चार दलको कठपुतली हो भनेर पनि त भन्नुभएको थियो, त्यसलाई त रेग्मीजीले तोडिदिनुभयो नि, होइन र ?
– हामीले त अब यो देश निरङ्कुशतातिरै जान्छ पनि त भनेका थियौँ नि । हेर्नुहोला रेग्मीजी अब निरङ्कुश तानाशाहीको अवतारमा देखिँदै जानुहुनेछ ।
० उहाँले त मङ्सिरमै चुनाव गराउँछु भनिरहनुभएको छ, कसरी तानाशाही बन्नुहोला र ?
– निर्वाचन त फासीवादी व्यवस्थामा पनि हुन्छ, पञ्चायतमा पनि भएकै थियो । निर्वाचन र डेमोक्र्यासी पर्यायवाची हो भनेर जो भनिन्छ, बकवास हो त्यो ।
० तपाईंहरू निर्वाचनको पक्षमै हुनुहुन्न भन्ने शङ्का दलहरूमा जो थियो, त्यो सत्य रहेछ भन्ने भएन र अब ?
– कुनै पनि हालतमा हामीलाई चुनावमा सामेल नगराई एकतर्फी रूपमा चुनावको नौटङ्की गर्ने गुरुयोजना नै थियो उनीहरूको ।
० त्यसो भए अब हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा तपाईंहरू भाग लिनुहुन्न ?
– कसरी लिने ? हाम्रो त दल दर्ता भएको छैन, नामावली नै दर्ता भएको छैन हाम्रो । बहिष्कार गर्ने चुनावमा किन दर्ता गर्ने भनेर सुरुदेखि नै हामी लागेको देख्नुभएको थिएन र ?
० यो सबै गर्न समय थपिदिने कुरा त गरेकै छन् नि दलहरूले ?
– भो कसैको यस्तो निगाह हामीलाई चाहिएन । कुरा त गोलमेच सम्मेलनमा जाने भन्ने पनि त गरिएको थियो, त्यो रातारात कसको इशारामा किन बदलियो ? समस्या समाधानको बाटो त त्यहाँबाट निस्कन्थ्यो नि, किन पछि हटेको ?
० तपाईंहरूले यसो भनिरहे पनि जनता त चुनावको पक्षमा गइसके, कसरी चुनाव बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ ?
– जनता चुनावको पक्षमा गएकै छैनन् । सङ्कटकालको बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनाव जत्तिको पनि हुनेछैन यो चुनाव, लेखेर राख्नुहोस् । यो निर्वाचन जनताले चाहनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन । यो चुनाव संविधान बनाउनका लागि रचिएको पनि होइन, नितान्त प्रायोजित हो । त्यसैले यो चुनाव त कुनै हालतमा हुन दिनुहुँदैन ।
० सेनाको साथ लिएर पनि चुनाव गराउने निचोडमा पुगिसकेका छन् नि प्रमुख दलहरू त ?
– कसरी सेना सडकमा उत्रिँदोरहेछ हामी पनि हेरौँला नि त । हामी कतै जाँदैनौँ, नेपालमै छौँ, हेर्छौं । सेनाले ब्यारेक छोड्ने आधार के हो ? ब्यारेकबाट सेना बाहिर निस्कनुपर्ने नेपालको अहिलेको परिस्थिति हो र ? यो हुनै सक्दैन ।
० सरकारले चाह्यो भने त निस्कन्छ नि ?
– नेपाल कोसँग लड्दै छ र सेना उत्रने ? त्यस्तो सङ्कटकाल के आइप-यो र सेना निस्कने ? सेना उत्रनुको मतलब त देशमा सैनिक शासन आयो भन्ने पो हुन्छ त । त्यस्तो भएमा त सैनिक शासनविरुद्ध जनता उत्रनुपर्ने हुन्छ । यसरी त अर्को खालको परिस्थिति पो निम्तिने भयो त मुलुकमा । राजाको कालमा पनि नभएको सैनिक शासन आउला त यो ‘जनताको शासन’ भनिएको बेला ? हेर्नुहोस्, अब यो मुलुकमा निर्वाचन हुँदैहुँदैन । अब यिनीहरू देशलाई सङ्कटकाल र निरङ्कुशतामा धकेल्ने गुरुयोजना लागू गर्नेतिर लाग्नेछन्, शान्तिप्रक्रिया पनि अब निश्चित रूपमा यिनले भङ्ग गर्ने छन्, चाँडै नै शान्तिप्रक्रिया भङ्ग गर्नेछन् ।
३ आश्विन २०७०, बिहीबार ०३:४३ मा प्रकाशित